मुछेत्र गुरुङ, अध्यक्ष एनआरएनए युके
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेको २०१५ सालको सेप्टेम्बर महिनामा सम्पन्न छैटौं अधिवेशनबाट मुछेत्र गुरुङको अध्यक्षतामा बनेको कार्यसमितिको दुई वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । लगभग २० महिना एनआरएनए युकेको अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका गुरुङसँग उनको कार्यकालको बारेमा एभरेष्ट टाइम्सले गरेको छोटो कुराकानी ।
तपाई हालै नेपाल गएर फर्कनुभयो, भ्रमणबारे बताइदिनुहोस् न ?
गैरआवासीय नेपाली संघ युकेले २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको विभिन्न स्थानमा सहयोग गरिरहेको अवस्थामा एक हजारवटा भवन निर्माण गर्ने योजनाअनुरुप हाल गोर्खा जिल्लाको लाप्राकमा ५ सय ७३ वटा घरहरु निर्माण भइरहेको छ । सो स्थानको स्थलगत भ्रमण गर्ने र स्वयंसेवा पनि गर्ने उद्देश्यका साथ मसहित उपाध्यक्ष हिराधन राई नेपाल गएका हौं । भवन निर्माण परियोजनालाई सहयोग गर्नका लागि अन्र्तर्राष्ट्रिय, गैरआवासीय र स्थानीय गरी ३ किसिमले स्वयंसेवा गर्न सकिने व्यवस्थाअन्तर्गत हामी एनआरएनएको हैसियतले स्वयंसेवाका लागि त्यहाँ पुगेका थियौं । त्यहाँ पुगिसकेपछि काम गर्ने मान्छेको निकै अभाव देख्यौं र एकजना कामदारलाई बाहिरबाट मान्छे लैजाँदा प्रतिदिन खानासहित १५ पाउण्डभन्दा बढी खर्च हुने देखियो । बेलायतबाट आफंै लाप्राक गएर स्वयंसेवा गर्ने संभावना धेरै कम भएकोले पनि हामीले कम्तीमा दुईजना लेवर स्पोन्सर गर्न चाहने युकेका साथीहरुलाई ‘लाप्राक भोलेन्टियर भाइवर ग्रुप’ बनाएर सहयोगका लागि अनुरोध गर्‍यौं । धेरै साथीहरुले सहयोग गर्नुभयो । त्यसको लागि म साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
परियोजनाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न ?
परियोजना भूकम्पबाट ध्वस्त भएको लाप्राफ गाउँभन्दा अलि माथि अवस्थित छ । गोर्खा छेवाटारबाट नै जोखिमपूर्ण कच्ची सडकबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्ने, एकएक छिनमा मौसम परिवर्तन हुने र काम गर्ने मान्छेको अभाव हुने भएकोले तोकिएको समयमा निर्माण पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन । सरकारबाट अनुमति पाउनका लागि करिब १ वर्ष नै लाग्यो । साथै, प्रतिघरको लागत १२ लाख रुपैयाँ पुग्ने अवस्था छ । अहिलेसम्मको काम हेर्ने हो भने यही जुन महिनाको आखिरीसम्म डिभिसी लेभलसम्मको काम सकाउने योजना छ । त्यसपछि चिठ्ठाद्वारा गाउँलेहरुलाई आप्mनो घरको यकीन गराउने छौं । र, उनीहरुले केही ढुंगा र गिट्टी सहयोग जुटाउन पर्ने हुन्छ । अबको १ वर्षमा एनआरएनएको सो ड्रिम प्रोजेक्ट पूरा हुनेछ ।
लाप्राक अन्यन्त विकट गाउँ, त्यसमा पनि प्रतिकूल मौसम सामना गर्नुपर्ने भएकोले पनि सो स्थानमा त्यतिधेरै घर निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण नै थियो । सजिलो ठाउँमा त जसले पनि सहजै बनाउँछ । र, एनआरएनले त्यस्तै ठाउँमा बनाउनु पर्छ भनेर सोे स्थानमा निर्माणको अभिभारा लिएको हो ।
लेवर स्पोन्सरबाहेक सो परियोजनालाई युकेबाट कति पाउन्ड सहयोग जाँदैछ ?
परियोजनाका लागि बेलायतका धेरै साथीहरुले सहयोग गरिसक्नुभएको छ । आईसीसीकाअनुसार विभिन्न देशका एनसीसीहरुले प्रतिवद्धता गरेको आधा रकममात्र संकलन भएको छ । त्यति ठूलो लागतमा घरहरु निर्माण भइरहेको छ । साँचो कुरा गर्नुपर्दा सो परियोजनाका लागि पैसाको अभाव छ ।
तपाईले एनआरएनए युकेको नेतृत्व गर्नुभएको करीब २० महिना पुगेको अवस्था छ । के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ?
विशेष गरेर एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवनको निर्माणमा आर्थिक संकलन गर्ने कार्य भयो । नेपालमा भएको नाकाबन्दीको अवस्थामा औषधि उपचारका लागि रकम संकलन गरी पठायौं । नेपाल हाउसका लागि २ वटा च्यारिटी कार्यक्रमको आयोजना गरियो । त्यो बाहेक विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनहरुमा भाग लिन लिएँं । सदस्यता बिस्तार लागि नयाँ अभियानको सुरुआत ग¥यौं । यसभन्दा पहिला अधिवेशनको बेला मात्र सदस्यता बन्ने र बनाउने चलन थियो । तर, अहिले हामीले चुनाव नै नआईकन करिब २०० जना भन्दा बढीलाई सदस्यता बाँड्यौं । धेरैजनाले ‘एनआरएनएको सदस्यता बन्यो भने के फाई्दा हुन्छ,’ भन्ने जस्ता प्रश्नहरु आएको हुनाले हामीले बेलायतमा नेपालीहरुले सञ्चालन गरेका विभिन्न खाले व्यवसाय गरेर बस्नुभएको व्यापारी साथीहरुसँग सल्लाह गरेर एनआरएनए युकेको परिचय पत्र भएका सदस्यहरुलाई कुनै पनि सामान खरिद वा सेवा लिँदा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थाको थालनी ग¥यौं । अहिले धेरैजनाले आफैं सदस्यता लिनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सम्पर्क गर्नेक्रम बढिरहेको छ । त्यसको साथसाथै सदस्यहरुको विवरण र आय–व्यलाई दुरुस्त राखेका छौं । यसभन्दा अघि उठेका आर्थिक अनुशासनका कुराहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आर्थिक पारदर्शिता बनाएका छौं । त्यसको साथसाथै नेपालबाट आउने विभिन्न तह र तप्ताका अतिथिहरुलाई स्वागत तथा सम्मान गर्ने, विभिन्न संघ संस्थाको निम्तामा जाने र आपूmले सकेको सहयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं ।
अब तपाईको कार्यकाल सकिन करिब ४ महिना बाँकी छ, अझै केही गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि ?
समयले भ्याएसम्म क्षेत्रीय इकाई विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह भइरहेको अवस्था छ । यदी संभव भयो भने मेरै कार्यकालमा नर्दन आयरल्यान्ड, वेल्स र स्कटल्यान्डमा क्षेत्रीय इकाई विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । र, अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको कसरी स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । सो नयाँ नेतृत्व चयनका लागि डा. चन्द्र लक्सम्बाको संयोजकत्वमा, रामशरण सिम्खडा सदस्य सचिव र पूर्ण लम्सम्बा, बिजन भट्ट, सुमाया राई र दुत पुन, कृष्ण गुरुङ सदस्य रहेको निर्वाचन समिति चयन गरिसकेका छौं । साथै, हामीले आगामी सेप्टेम्बर ९ तारिखका दिन अल्डरसटको एम्पायर हलमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । निर्वाचनको बारेमा निर्वाचन समितिसँग पहिलो चरणको छलफल समेत गरिसकेका छौं ।
तपाईंको प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन ?
‘एनआरएनए युकेलाई सक्षम खालको संस्था बनाउँछु, काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्छु, नेपाल हाउसको थालनी गर्छु र आर्थिक पारदर्शितालाई विशेष ध्यान दिन्छु’, भनेको थिएँ । जहाँसम्म लाग्छ मलाई पूरा भएको महसुस भएको छ । एनआरएनए सबै नेपालीको साझा संस्था हो । यसका लागि नेपाल हाउस आवश्यक भएका महसुस गरी सो अभियानलाई निरन्तरता दिने कार्य भएको छ । नेपाल हाउस ठूलो परियोजना हो । त्यो पूरा हुन पक्कै पनि केही वर्ष लाग्छ । आर्थिक पाटो संस्थाको मुटु हो, त्यसलाई पारदर्शिता बनाउनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं र अहिले कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ राखेका छैनौं ।
अर्को कुरा भनेको हामीले सदस्यता लिएका व्यक्तिहरुका लागि सामान खरिद गर्दा ठाउँ÷ठाउँमा छुटको व्यवस्था गरेकोले पनि अहिले नेपालीहरु आफंैले सदस्यताका लागि सम्पर्क गर्न थालेको अवस्था छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा एनआरएनको सदस्य लिन आफैं आउने संस्कारको विकास भएको छ । र, अहिले सदस्यता लिनेक्रम पनि बढिरहेको छ ।
सदस्यता लिने व्यवस्था के छ ?
नेपालको कानुनले दुई सय दिनभन्दा बढी बाहिर बस्ने विद्यार्थीबाहेक सबै नेपालीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली भनेर परिभाषित गरेको छ । यसभन्दा अघि सदस्यता शुल्कबापत १५ पाउन्डमा तोकिएको थियो । जस्मा १० पाउन्ड सदस्यता शुल्क र ५ पाउन्ड परिचय पत्रबापत लिने गरिन्थ्यो । तर, हामीले यस वर्ष २५ पाउन्ड शुल्क बनाएका छौं । अहिले किन २५ पाउन्ड भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिले आईसीसीले नेपालमा बनाउन लागेको बिल्डीङ्गको लागि १० डलर अतिरिक्त शुल्क, सदाझंै हरेक सदस्यले यसवर्ष पनि ५ डलर आईसीसी शुल्क लिने भएको हुँदा यसवर्षको लागि २५ पाउण्ड सदस्यता शुल्क तोकिएको हो । सो २५ पाउन्डमा ५ पाउन्ड परिचय पत्रको पनि हो । र, अर्को वर्ष फेरि सदस्यता शुल्क १५ पाउन्ड नै हुनेछ । अहिले विशेष परिस्थिति कारण वृद्धि गरिएको हो ।
फेरि नेतृत्वमा बस्ने चाहना छ कि ?
नयाँ जोश र जाँगर लिएर आउने साथीहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । फेरि निरन्तरता दिने पक्षमा म छैन ।
तमुधिं युकेको अध्यक्ष पनि सम्हाल्नु भयो र एनआरएन युकेको अध्यक्ष पनि सम्हालिरहनु भएको छ, यी दुई संस्थामा काम गर्दा के कस्तो भिन्नता पाउनुभयो ?
तमुधिं हाँक्दा सजिलो थियो । तर, यहाँ अलि गाह्रो हुँदोरहेछ । एनआरएनएमा हाईली स्कील भएका साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरु धेरै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ । त्यसकारण थोरैले मात्र समय दिनसक्ने रहेछ । मलाई लाग्थ्यो, जातीय संंस्थाभन्दा सजिलो हुन्छ भन्ने । तर, एनआरएनएमा समय दिनसक्ने साथीहरु अलि कम हुने रहेछ । सल्लाह र सुझावहरु प्रशस्त पाइए तापनि फिजिकली सहयोग पाउन अलि गाह्रो हुने रहेछ ।
अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
एनआरएन भनेको हामी सबै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संगठन हो । नेपाल सरकारले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्र्तगत एनआरएन विभाग नै बनाएको अवस्था छ । हामीले आप्mना कुराहरुलाई मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष रुपमा राख्न सकिन्छ । त्यसैले एनआरएनए युकेको सदस्यता लिनहुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।